राजनीति | 2017-11-05 14:18:00 |
काठमाडौं कात्तिक, –
माओवादी केन्द्रका नेता झक्कु प्रसाद सुवेदी उम्मेदवार बनेको काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । क्षेत्र नंं. ६ झक्कु सुवेदीको उम्मेदवारीको कारण पनि चर्चित र सबैको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको हो । माओवादी केन्द्रको प्रदेश नम्बर ३ को संयोजक समेत रहेका सुवेदीको चर्चा यसकारण पनि बढेको हो कि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले काठमाडौं २ बाट एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव नेपाललाई फराकिलो मतान्तरले पराजय गर्न सफल भएका थिए ।
उनै सुवेदी फेरि अहिले काठमाडौं ६ बाट माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन् । अहिले उनी माओवादी केन्द्रको मात्र उम्मेदवार होईनन् । उनी एमाले र माओवादीले बनाएको वाम गठवन्धनको साझा उम्मेदवार समेत हुन् । सुवेदी पार्टी भित्र मैले यो योगदान गरेको छु भनेर भाग खोज्ने नेता होईनन् माधव नेपाललाई हराएपछि उनलाई त्यति ठुलो नेतालाई हराएको पार्टीमा मन्त्री दाबी गर्नुपर्छ भनेर उच्काउने पनि नभएका होईनन् । तर, नेता सुवेदीले त्यो चरित्र कहिले पनि प्रदर्शन गरेनन् । उनी केवल पार्टीको इमान्दार सिपाहीका रुपमा मात्र आफूलाई दर्ज गरिरहे । पहिलो संविधानसभामा माओवादीको त्यो उपस्थिति झनै एमाले जस्तो दलको महासचिवलाई हराएको मान्छे पार्टीमा उनले मन्त्रीको इच्छा देखाएको मात्र भएपनि नपाउने कारणै थिएन । तर, उनले कहिले पनि पार्टीबाट मैले पाउनुपर्छ भन्ने सोंचाईनै राखेनन् । उनले पार्टी संगठन निर्माणमा अफ्नो समय व्यतित् गर्न थाले ।
केही मान्छेहरुले झक्कु सुवेदी माधव नेपाललाई हराएर पनि राजनीतिबाट गुमनाम भयो भनेर चर्चा परिचर्चा नगरेका पनि होईनन् । कुनैबेला नेता सुवेदीले नेवाः राज्यको इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गरे भने अहिले पनि ३ नम्बर प्रदेशको संयोजकको भूमिका निभाईरहेका छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुलाई थाहा छ उनी पार्टीमा मलाई यो चाहियो भनेर कहिले माग्दैनन् तर, पार्टीले जुनसुकै जिम्मेवारी दिए पनि जिम्मेवारीबाट उनी भाग्दैनन् । त्यसैले अहिले उनी पार्टीले जिम्मेवारी दिएपछि काठमाडौंबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । ७० को निर्वाचनमा नेता सुवेदी उम्मेदवार बनेन् । त्यतिबेला पनि कोही कोहीले हल्ला चलाए माधव नेपाललाई हराएको झक्कुलाई माओवादीले टिकट दिएन, उनी राजनीतिबाट ओझेल परे भनेर । तर, यथार्थमा त्यतिबेला उनी एउटा क्षेत्रको होईन पुरै पार्टी संगठनको संगठन विस्तार र पार्टी बलियो बनाउने अभियानमा पार्टीले खटाएपछि पार्टीको निर्णय शिरोपर गरेर बसेका हुन् ।
वाम गठवन्धनका उम्मेदवार सुवेदीको मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका भिमसेनदास प्रधानसँग हुदैछ । २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन जितिसकेका सुवेदीको ६ नम्बरमा पनि पल्लाभारी रहेको देखिन्छ । किनभने माधव नेपाललाई पहिलो संविधानसभामा पराजय गरेका सुवेदीका काठमाडौको प्रायः सबै क्षेत्रमा व्यक्तिगत शुभचिन्तक समेत रहेका छन् । गएको ७० को निर्वाचनमा क्षेत्र नं. ६ मा योगेश भट्टराईको मत पनि निकै राम्रो आएको थियो । माओवादीको मत र एमालेको मत जोड्दा सुवेदीले अत्याधिक मतान्तरले कांग्रेसका प्रधानलाई पराजय गर्ने देखिन्छ ।
२०१८ साल माघ २८ गते रोल्पा जिल्लाको साविक गजुल गा.वि.स वडानं. ४ पानीपोखरा र हालकोे सुवर्णावति गाँउपालिका–६ मा जन्मिएका सुवेदी सानैदेखि नेता बन्ने स्वाभावको रहेको स्थानीय बुढापाकाहरु भन्ने गर्छन । हुनत, सुवेदीले अध्यात्ममा बिश्वास गर्दैनन् तर, एक स्थानिय बुद्धा जो उनको आफन्त समेत पर्छिन उनले भने अनुसार सुवेदी सानो छदा गाउँमा आएका एक ज्योतिषले उनका हस्त रेखा हेरेर ‘यो मान्छे सामान्य मान्छे भन्दा फरक हुन्छ, या त यो जोगी बन्छ या त देशकै ठुलो मान्छे बन्छ’ भनेका थिए रे । हुन पनि त्यस्तै भयो रोल्पाको दुरदराजमा जन्मिएका सुवेदी अहिले यो मूलुककै नेता बन्न सफल भए ।
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरुवात गरेका सुवेदी त्यतिवेलाका ‘उम्दा’ विद्यार्थी नेताको परिचय बनाउन सफल भएका थिए । त्यतिवेलादेखिनै उनले जेलनेल भोग्न सुरुवात गरे । २०४२ सालमा आईपुग्दा उनी शिक्षकको जागिरे हुन पुगे । रोल्पा जस्तो ठाँउ त्यो पनि सदरमुकाम होईन दुर्गम गाँउमा जन्मिएका सुवेदीले स्नातक पास गरे र शिक्षकको जागिर सुरुवात गरे । शिक्षकमा पनि उनी नेतृत्व तहमै पुगेर राजनीति गर्न पुगे । अन्याय सहन नसक्ने चरित्रका सुवेदीले शिक्षक हुदै गरेको आन्दोलले उनी रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा पक्राउ परे । हो त्यहि जग हो आज उनी झक्कु प्रसाद बन्नु । उनका आफन्त सुवेदीहरु पंचायतकालमा निर्वाचन जितेर सत्ताको तर मारेर बसिरहेकाबेला सुवेदी उनीहरुको प्रतिकार गरेर फरक धार वामपन्थीको भूमिकामा अघि बढ्नु उनको लागि सामान्य चुनौतिको बिषय थिएन । तर, उनले त्यो अठोट गरे र बिद्रोही भाव लिएर लम्किरहे । २०४६ सालको आन्दोलनमा उनी सक्रिय सहभागि भए । बहुदल आए पश्चात पहिले मसाल, मशाल, एकता केन्द्र हुदै उनी संयुक्त जनमोर्चाको रोल्पाको नेतृत्व तहमा रहिरहे । राजनीतिले उनलाई यति पच्छायो कि २०४८ सालमा माध्यमिक तहको शिक्षकको स्थाई जागिर छाडेर उनी पूर्णतया राजनीतिमा होमिए । २०४८ सालमा भएको स्थानिय निर्वाचनमा उनी गजुल गा.वि.स को अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनी रोल्पा जिल्लाको जिल्ला बिकास समितिको सभापति बन्न पुगे ।
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध रोल्पाको होलेरीबाट सुरु भयो । लगत्तै जिल्ला बिकास समितिको बाहालवाला सभापति समेत रहेका झक्कु सुवेदी लिवाङबाट पक्राउ परे । ५२ मा पक्राउ परेका उनले शारिरिक र मानशिक यातना कति पाए भन्ने कुरा उल्लेख गरि साध्य छैन । अहिले पनि त्यतिबेलाको पिटाईको कारण उनलाई शरिरमा विभिन्न समस्या आईरहन्छ भनेर उनले बताउने गर्छन । रोल्पामा पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौंको भद्रगोल बन्दिगृह पुर्याईयो । २०५४ सालमा उनी जेलमुक्त भए र मुक्त भएको केही समय पछि उनी माओवादीको पूर्णतया कार्यकर्ताको रुपमा भुमिगत बन्न पुगे । उनी भुमिगत भएता पनि उनका परिवार सामान्य जीवन जिउदै थिए । तर, जव, जनयुद्ध उचाईमा पुग्दै थियो तत्कालिन राज्यले उनको परिवारलाई दुःख दिने कार्य पनि बढ्दै गयो । उनका छोरा छोरी लुकेर पढ्नुपर्ने, शहरमा बस्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुन थाल्यो । छोरा छोरी मात्र होईन स्थानिय स्कुलमा शिक्षकको जागिर खाँदै आईरहेकी उनकी श्रीमती राज्यले चरम दमन गर्न थालेपछि, तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले क्षण क्षणमा दुःख दिन थालेपछि उनी पनि खाँदै आएको स्थाई शिक्षक जागिर छाडेर भुमिगत हुन बाध्य भईन् । छोरा छोरी पनि भुमिगत हुन बाध्य पारिए । सारा घरवार छाडेर केवल पार्टी र जनता भनेर युद्धमा होमिएको सुवेदीको परिवारले युद्धकोबीचमा अकल्पनिय दुःख भोगेर पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै यो अबस्थासम्म आईपुगेका हुन् ।
रोल्पामा उनी आफ्नो दलको मात्र होईन अरु दलको कार्यकर्ताको पनि उतिकै प्रिय छन् । उनले पार्टीका आधारमा कसैलाई भेदभाव समेत गर्दैनन् । यहि कारणले आज उनी सबैको मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन् । बालक, युवा तथा बुढा बुढी सबैको उनी प्रिय छन् । काठमाडौं ६ मा जित हाँसिल गरेर सुवेदीले अर्को बिशेषता थप्न सकुन उनलाई शुभकामना ।
संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था खारेज गरि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यको माग गर्दै...
अर्थमन्त्री र परिसंघका पदाधिकारीबीच छलफल, निजीक्षेत्रको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछः अर्थमन्त्री
नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उहाँको कार्यकक्षमा भेट...
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले समाजमा रहेका अनियमिता र बेथितिलाई अन्त्य...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको साथ लिएर अघि बढ्ने बताउनु...
यो वर्ष सबै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा: अर्थमन्त्री पौडेल
बुटवल । गत वर्ष संसद विकास कोषको सबै रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका रुपन्देही क्षेत्र नम्बर...
गोरखा १२, मङ्सिर (रासस) : भारतीय विदेश सचिव हर्षबद्र्धन शृङ्गलाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा...
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले नेपालको हवाई...
काठमाडौ, मंसिर १२ । संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया...
संघीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला भयोः मन्त्री तुम्बाहाङ्फे
काठमाडौं । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला...